CNEAGR: Mitohy ny sahotaka… | GAZETY_ADALADALA
CNEAGR: Mitohy ny sahotaka…
Posted on 08/02/2010 by gazetyavylavitra
Marihako eto ampiandohana fa mandalo sy miserana ity lahatsoratra ity, ka rahampitso ihany dia efa hiala eto, nefa kosa hotehiriziko amin’ny toerana hafa, mba havoaka indray amin’ny fotoana ilàna azy
Noho ny lahatsoratra navoaka teto amin’ny Gazety_Adaladala tamin’ny 10 janoary 2010 teo momba ny lazain’ny mpiasa fa kiantranoantrano, sy ny fikarakarana manokana ny havana sy ny namana nataon’ny tompon’andraikitra ambony teo anivon’io Sampana iray ao anatin’ny Ministeran’ny Rano io, dia nisy ny olona nampiandraiketina ny famotorana natao teny amin’ny Moov. Asa raha nahita rirany tany ry zareo na tsia? Ny tanjona dia ny hahitana izay manoratra sy manome vaovao ao amin’ny Gazety_Adaladala.
Tezitra mafy mantsy ilay Minisitra nodimbiasan’ny eo an-toerana ankehitriny raha nahita ny vaovao teto anivon’ny aterineto
Lamba malotontsika ve ka dia any ivelany no hosasana
hoy izy raha nampiantso ireo mpiasa tao anivon’ity Sampana ity. Fampiantsoana izay niarahany nanao tamin’ny Tale ankehitriny eo anivon’izany Sampana izany.
Narahana rahom-bava moa ny fampiantsoana sy ny fanadihadiana natao tamin’ny mpiasa tsirairay, ary dia mbola narahana fampiantsoana manokana ireo solontenan’ny mpiasa ihany koa (hiresaka manokana tamin’ingahy minisitra teo aloha).
Nisy mpiasa tranainy iray nametraka fialàna talohan’ny fipoahan’ny vaovao teto amin’ny gazety_Adaladala ka dia noheverin’ireto mpitantana ireto fa izy io no loharanon’ny zavatra rehetra. Isan’ny ataon-dry zareo haza lambo ankehitriny io mpiasa io, ary efa nifampitadiavana teny 67Ha fa tsy hita teny. Voalaza mantsy fa misy ‘données’ an’ny Foibe nesorin’ity mpiasa tranainy ity talohan’ny nametrahany ny taratasy fametraham-pialany.
Nanomboka tamin’ny fampitandremana nomena ny mpamahana ny Gazety_Adaladala dia nohidiana ny varavaranan’ny Gazety mba tsy ho ny olon-drehetra no hijery azy (mandra-pahatonin’ity raharaha ity – satria mbola tsy milamina io hatramin’izao). Misokatra tsindraindray ho an’ny besinimaro ihany anefa izy, ka izay tsara vintana amin’ny fotoana fisokafan’ny varavarana no mahita izay voasoratra ao (ankoatra ireo nomena lakile manokana hiditra ao aminy amin’ny fotoana rehetra)
Raha ny 10 janoary 2010 no nivoaka ny lahatsoratra, dia ny 4 febroary no nanomboka ny sahotaka. Izay narahana ‘sit-in’ tao amin’ny toeram-piasana tao Nanisana. Ilay mpiasa tranainy nametra-pialana dia ny 3 febroary 2010 no nandao ny toeram-piasana.
Marihana fa ny zanak’anabavin’ingahy minisitra teo aloha, izay manaraka fiofanana, ary tondroin’ny mpiasa ho efa manindrinindry sahady ireo tranainy, sy efa milaza tena ho tompon’andraikitra ambony atsy ho atsy no nitahiry tanaty memoire Flash ny lahatsoratry ny Gazety_Adaladala ka nizara azy tamin’ingahy Minisitra (izay fianakaviany moa) sy ireo lehibe ao amin’ny toeram-piofanana.
Misy mpikambana amin’ny sendika FISEMARE vitsivitsy ao amin’ireo mpiasa miisa 32 ao amin’ity toeram-piofanana ity. Isan’izany ireo solontenan’ny mpiasa. Tsy mbola nisy anefa fanatonan’ireto solontena ireto tany amin’ny sendika foibe nanazava ny olana mahazo azy ireo.
Amin’izao fotoana, na dia efa tsy tokony hisy intsony aza ny fandraisana mpianatra voavao eo anivon’izany toeram-piofanana izany, dia mbola nisy indray ny tsindry avy amin’ireo mpitantana teo aloha, ary narahan’ny fanerena avy amin’ny Tale amperinasa, ny mba handraisana ilay mpianatra tamin’ity herinandro ity.
Mitaraina koa ny mpiasa fa misy amin’ireto havan’ny ‘olo-maventy taloha’ ireto no manao amboletra mampiasa ny fiaran’ny toeram-piofanana ary tsy mitontaly izay fahasimbana nataony, fa izay simba dia avela , ary maka hafa indray.
Alatsinainy 08 febroary 2010, nilazàna ny mpiasa fa hiresaka amin’izy ireo isaky ny sampan’asa misy azy avy ny tompon’andraikitra (asa raha ho eo ingahy minisitra taloha) mba handraisana izay fitarainana sy fanirian’izy ireo tsirairay avy. Efa niray hina moa ireto mpiasa fa ny resaka karama izay tena hita tokoa ny fametrahana ny resaka namana, havana sns… no tena hasiana resaka betsaka. Misy elanelany be ny an’ireo havana sy namana vao nampidirina raha oharina amin’ny an’ireo mpiasa tranainy nanome fiofanana sy namindra ny traikefany ho an’ireto ‘fianakaviana’ ireto.
Vokatry ny antsojay mahazo azy ireo saiky isan’andro vaky, dia re izao fa misy mpiasa iray hafa koa efa manomana ny fialàny ao amin’io toeram-piofanana io.
Talohan’izao dia efa nisy koa ny filazana fa hihaona amin’ny Minisitra ankehitriny misahana azy ireo ny solontena avy amin’ny mpiasa. Tsy naharenesana vaovao aloha ny momba an’izay hatreto.
Maro ny anaran’olona eto ampelatanan’ny Gazety_Adaladala, nefa tsy fotoanany angamba aloha izao hamoahana an’ireny.
Ampahatsiahiviko ihany, fa lahatsoratra handalo fotsiny ihany ity lahatsoratra ity, ary mazava loatra araka izany fa tsy hitoetra ela eto amin’ny Gazety_Adaladala, raha tsy aorian’ny famerenana mamoaka azy any aoriana any.
Filed under: anao ny fitenenana, politika, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: CNEAGR, kiantranoantrano, Nanisana |
« 7 Febroary 2009: Nivarotra aina… Fitsaboana: Aza mba marary ihany… »